3 sabab oo Senator CABDI XAASHI uu mar kale si fudud ugu noqon karo guddoomiye | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Warkii 3 sabab oo Senator CABDI XAASHI uu mar kale si fudud ugu...
3 sabab oo Senator CABDI XAASHI uu mar kale si fudud ugu noqon karo guddoomiye
Soo noqoshada xubinta aqalka sare ee Sen. Cabdi Xaashi waxay astaan u tahay inuu si fudud ku hanto gudoomiyenimada Aqalka sare. Gudoomiyaha ayaa waxaa si weyn u wata kooxaha mucaaradka iyo maamulada qaar, waxaa kale oo codad fiican ka helayaa qaybta reer Somaliland oo uu in badan u doodayey xuquuqdooda. Waxaase cad inuusan jirin Senator kula tartama xilka oo heli kara wareega koowaad codad wanaagsan, hadiiba uusanba soo bixin wareega kowaad.
Sabaha soo socda awgood:
1- Cododka 11 ee Puntlnad oo dhankiisa aadaya
2- Codadka 8 ee Jubaland oo dhankiisa aadaya
3- Muuse Suudi, Prof. Dufle, iyo Prof. Abdi Ismaciil oo xaqiiq tahay inay isaga dooranayaan.
Codadka aan kor ku sheegay wax waa iska badali karaan, lakiin 90% waa hubaal inuu helayo codadkaas 22 ah. Codaka kale waa suurtagal inuu ka helo qayb fiican, kaliya waxaan xusay codadka ay u badan tahay inuu helo wareega koowaad iyo meelaha ay ka imanayaan.
Maamulada Puntland iyo Jubaland maahan kuwo khamaar ku galaya qof cusub oo aysan aqoon isu lahayn inuu kursiga ku soo baxo, labada maamulna waxay heshiis ka yihiin siyaasada guud ee dalka iyo doorashada cida la taageerayo.
Labada maamul waxay in badan fagaarayaasha uga doodeen qadiyada kooxda Cabdi Xaashi watay iyagoo mar walba garab sinayey kooxda Gud. Cabdi Xaashi, waxayana sabab u ahaayeen labada maamul iyo mucaaradkuba inuu soo gaaro meeshaan.
Ra’iisul Wasaare ku–xigeenka Mahdi Guuleed ayaa dhankiisa raali ka noqonayn inuu kursiga aqalka sare ku soo baxo qof ka socda beesha ay saami wadaaga yihiin ee Garxajis, taas oo uu ku ilaashanayo kurigiisa RW kuxigeenimo marlabaad oo rajo ka qabo, waxaa arinkaan saacidaynayaa inuu qof aan Gar-Xajis ahayn soo baxo.
Madaama Somaliland kursigaan laga leeyahay ma jiraan loolan adag oo kooxaha siyaasadu ku bixinayaan qofaan Cabdi Xaashi ahayn. Sidaas oo kale musharaxiinta la tartami doonta ayaa adkaanaysaa inay cod ahaan ku soo dhawaadaan wareega koowaad, sababtoo ah waxay noqon doonaan musharaxiintu ugu yaraan 3-5 musharax oo ay qabysamayaan codadkoodu.
Abdi Xaashi inkasta oo dagaal adag ay dhex mareen isaga iyo Madaxtooyadu, hadana wali waa nin qadarin badan u hayaan dadka Soomaaliyeed, waxaana u badan tahay in marlabaad loo cumaamado xilka gudoonka Aqalka Sare hadiiba uu marlbaad go’aansado inuu u tartamo.
F/G: Tani waa qiyaastayda iyo aragtidayd, waana suurtagal inay wax iska badalaan
W/Q: Diraac S Fagaase
Previous articleJeneraal Xuud oo 48 saac u qabtay HirShabelle kadib arrintii ka dhacday Jowhar
Next articleSaddex arrin oo caddeyn u ah in Mahdi Guuleed uu ka baxay taageeradii Farmaajo